वयस्कहरू र बच्चाहरूको लागि औषधि बिना ADHD र चिन्ता उपचार
यो डेभिड अलर्ट र डेभिड ALERT प्रो वयस्कहरू र बच्चाहरूका लागि hyperactivity व्यवस्थित गरेर, विश्रामलाई बढावा दिँदै, र मुड र तार्किक सोचमा सुधार ल्याएर एडीडी / एडीएचडी लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्न पोर्टेबल ह्यान्ड-होल्ड गरिएको उपकरणहरू हुन्। ALERT सत्रहरू २० बर्ष सम्मिलित विशेषज्ञता र अनुसन्धानको परिणाम हो व्यक्तिगत संसाधन रणनीतिहरूको माइकल जोइस र डेभिड सीभरको मन जिउँदो इंक। चेतावनी प्रो एक अद्वितीय फ्यूजन प्रदान गर्दछ अडियो-दृश्य प्रविष्टि (AVE) र Cranio- इलेक्ट्रो उत्तेजना (CES).
वयस्कहरू र बच्चाहरूको लागि ADD / ADHD का लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न अब एक फार्मास्यूटिकल मुक्त तरीका छ
माइकल जोइसले DAVID प्रणाली प्रयोग गरेर दुई अध्ययन पूरा गरे ADD / ADHD लाई व्यवहार गर्नुहोस् र चिन्ता औषधि बिना उपचार। उनको पहिलो अध्ययनमा दुई विद्यालयका primary० प्राथमिक विद्यालय केटाकेटीहरू सामिल थिए (जुन जर्नल अफ न्युरोथेरापीमा प्रकाशित भएको थियो) र उनको दोस्रो अध्ययनमा schools स्कूलका २० 30 बालबालिका समावेश थिए जुन उनले पूरा गरे जब उनी ए चेन्स टू ग्रोमा न्यूरो टेक्नोलोजीका निर्देशक थिए। Minneapolis मा चार्टर स्कूलको आवश्यकता छ।
दुबै अध्ययनहरूले देखाए कि ADD आचरणहरू उल्लेखनीय रूपमा कम भएका थिए र पढ्नको लागि AVE सुधारिएको थियो। माइकलले मस्तिष्कको प्रत्येक गोलार्धमा भिन्न आवृत्ति उत्पन्न गर्न DAVIDs 'अनौठो पेटन्ट गरिएको क्षेत्र उत्तेजना क्षमता प्रयोग गर्‍यो। यो प्रविधिको साथ र माइकल द्वारा विकसित एक लक्षण सर्वेक्षण चेकलिस्टको साथ, उसले डेभिड सत्रहरू सिर्जना गर्न सक्षम भयो जुन बायाँ, दायाँ वा दुबै गोलार्ध उत्तेजित गर्न वा शान्त गर्न सक्दछ बालबालिकाका अभिभावकहरूले जाँच गरेको लक्षणहरूको आधारमा।
समयको अन्तरालमा, माइकलले अनुसन्धान सूचीमा आधारित यी सत्रहरूलाई परिष्कृत र विकसित गर्‍यो विशेष क्षेत्रहरूमा फाइदा लिन। अब, यी सबै विशेषज्ञता मा राखिएको छ डेभिड अलर्ट.
एडीडी / एडीएचडी एक न्यूरोलोजिकल अवस्था हो जुन मुख्यतया मस्तिष्कको प्रि-फ्रन्टल र फ्रन्टल क्षेत्रमा कार्य गर्दछ। नतिजाको रूपमा, ADD / ADHD वयस्कहरू र बच्चाहरू आवेगपूर्ण, बेवास्ता गर्ने र विकर्षण योग्य हुन्छन्। तिनीहरू पनि अक्सर उत्तेजित चाहना गर्छन् (राम्रो वा नराम्रो) आफ्नो दिमाग उत्तेजित गर्न प्रयासमा।
हाम्रा धेरै उत्कृष्ट उद्यमीहरू, दूरदर्शीहरू, आविष्कारकहरू, कलाकारहरू, संगीतकारहरू, वैज्ञानिकहरू र कर्पोरेसनहरूको सीईओसँग एडीडी / एडीएचडी छ। कम्पनीहरूको भर्जिन समूहका रिचर्ड Branson आफ्नो ADHD आफ्नो भारी व्यापार सफलताहरु को श्रेय! त्यसो भए, राम्रोसँग चन्निएको, उत्तेजित गर्न र सिर्जना गर्न ADHD- प्रेरित ड्राइभ एक शक्तिशाली सम्पत्ति हुन सक्छ। व्यवस्थापन र दिशाविना, ADD / ADHD व्यक्तिलाई स्कूल / समाजमा र सम्बन्धमा आफैंलाई नियमन गर्न असाध्यै गाह्रो हुन सक्छ।
एडीएचडी र चिन्ता औषधि बिना उपचार
सबै मानसिक कार्यहरूमा उत्तेजनाको एक तत्व समावेश हुन्छ - दिमागको "जागृति" वा सतर्कता। मस्तिष्कको उत्तेजना को स्तर नाटकीय रूपमा एक विशेष मानसिक चुनौती प्रदर्शन गरिनेछ कसरी राम्रो गर्छ। उदाहरण को लागी, ध्यान दिनु लगभग असम्भव छ यदि दिमागले अल्फा वा थेटा (काल्पनिक) दिमागका तरंगहरू बनाउँदैछ। वयस्कहरू र बच्चाहरूका लागि निदाउन यत्तिको गाह्रो मात्र हो अत्यधिक बीटा (सतर्कता) दिमागका तरंगहरू आँखा बन्द हुँदा उत्पादन हुने गरी।
ध्यान डेफिसिट डिसअर्डर (एडीडी) वा ध्यान डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसअर्डर (एडीएचडी) जस्ता ध्यान केन्द्रित समस्या भएका वयस्कहरू र बच्चाहरूका लागि उनीहरूको अगाडिको लोबहरू (निधारको पछाडिको मस्तिष्कको भाग) लाई "गियर" मा बदल्न विशेष कठिनाई हुन्छ। पूर्व-फ्रन्टल लोब्स ध्यान, इरादा र तार्किक तर्कको लागि जिम्मेवार छन्। यी क्षेत्रहरू ADD / ADHD मस्तिष्कमा खराब रूपमा कार्य गर्दछ किनकि रगत प्रवाह कम भयो र धेरै ढिलो अल्फा र / वा theta मस्तिष्क छालहरूको उत्पादनको कारण, विशेष गरी संज्ञानात्मक (सोच) कार्यहरू र निष्क्रिय कार्यहरू (पढ्ने) को समयमा।
वयस्कहरू र एडीडी / एडीएचडीका साथ बच्चाहरूको लागि, उत्तेजनाको उच्च स्तरहरू प्री-फ्रन्टल लोबहरू ब्यूँझाउन देखाईएको छ, परिणामस्वरूप कम hyperactivity, सुधार गरिएको ध्यान, र कम मुडापन। एडीडी / एडीएचडीका साथ व्यक्ति उत्तेजक भिडियो गेम र एक्शन खेलहरू राम्रोसँग गर्दछन्। जबसम्म गतिविधि रमाईलो हुँदैन (उत्तेजना जगाउने), प्रि-फ्रन्टल र फ्रन्टल लोब्स चाँडै तिनीहरूको ध्यान र सक्रियता गुमाउँछ। थेटा र / वा अल्फा मस्तिष्क तरंगहरू नाटकीय रूपमा वृद्धि र व्यक्ति "fogs बाहिर।" सामान्य स्कूल सेटिंग्समा उत्तेजनाको अभावले ADD / ADHD बच्चाहरूलाई मानसिक कुहिरोसँग निरन्तर संघर्ष गर्न बाध्य पार्छ, जसले न्यून ग्रेडमा अग्रसर गर्दछ।
अडियो-दृश्य प्रविष्टि (AVE) ले सम्पूर्ण दिमाग र शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउँछ। यो निरन्तर स्पष्ट छ र ती बच्चाहरूद्वारा प्रदर्शन गरिएको छ जुन स्कूल र घर दुबै सेटिंग्समा AVE प्रयोग गर्ने अवसर पाएका छन्। धेरै स्कूलहरूले एकसाथ आफ्ना विद्यार्थीहरू र स्टाफको फाइदाको लागि AVE कार्यक्रमहरू शुरू गरेका छन्। अधिक र अधिक बच्चाहरूलाई उनीहरूको जन्म सम्भाव्यता महसुस गर्ने अवसर दिइन्छ जुन धेरैले महसुस गरेनन्। उनीहरूले बुझेका छन् कि जैव रासायनिक प्रयोग जीवन भनिन्छ धेरै हदसम्म जीवन कसरी जीउँदछ र कसैको जीन पूल बिच एक समन्वयित प्रयास हो। तिनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव र अनुभव गरेका छन् उनीहरूको जन्म कष्ट रसायनहरूको गहन प्रभाव - बनाम - तिनीहरूको मर्मत रसायन र कसरी AVE ले सिकाएको फरक फरक बुझ्न। यस चेतनाले उनीहरूलाई जीवनको परीक्षा र स of्कष्टहरूको सामना गर्नुपर्दछ।
एडीएचडी र चिन्ता वयस्क र बच्चाहरूको लागि उपचार
यो डेभिड अलर्ट र डेभिड अलर्ट प्रो "एडीएचडी र औषधि बिना चिन्ताको उपचारको लागि बनाइएको उपकरणहरू" पढ्न-सजिलो, अप-अपरेट अपरेटिंग बटन र प्रयोगकर्ताहरूलाई सत्र सजिलैसँग चयन गर्न अनुमति दिन सुविधा प्रदान गर्दछ। ALERT र ALERT प्रो प्रयोगकर्तालाई अन्धकारमा हेर्नको लागि अनुमति दिन सत्र कोटी बटनहरू जलाइन्छ।
मन जिउँदो इंक। Enhance० बर्षदेखि दिमाग विकास बृद्धि गर्ने उत्पादनहरुको डिजाईन र निर्माण गर्दैछ र त्यस बृहत अनुसन्धानले निरन्तर यस ग्राउन्डब्रेकिंग टेक्नोलोजीका लागि नयाँ अनुप्रयोगहरु प्रकट गर्दै आएको छ।